USUVULWE NGOSEMTHETHWENI UMTAPO WOLWAZI ELIZOSETSHENZISWA NGABANGABONI EMEHLWENI – Sivubela intuthuko Newspaper
UMNU Mbongeni Mathe waseMsunduzi noNkk Schreiner beqeda kucikica isivumelwano sokusebenzisana
SAMUKELWE ngelikhulu ihlombe isikhungo sabangaboni emehlweni esivulwe eBessie Head Msunduzi Municipal Library eMgungundlovu esithulwe ngesikhathi kwethulwa neseMzala Nxumalo Centre of Study esiqanjwe ngesishabasheki esasilwa nobandlululo olwalubhekiswe kubantu abamnyama ngezikhathi zikahulumeni wengcindezelo.
Ubuholi bukaMasipala waseMsunduzi oholwa yiMeya uMnu Mzimkhulu Thebolla nobaseBessie Head Library obuholwa nguMnu Mandla Ntombela bamukele abeMzala Nxumalo Centre okuyisikhungo esiqanjwe ngoMnu Jabulani Nobleman Nxumalo owayeyisosha loMkhonto Wesizwe futhi eyisishoshovu esasilwela inkululeko yabantu abamnyama eNingizimu Afrika. Ngaphakathi kule-library kwethulwe igumbi eliqanjwe ngaye uMzala njengoba ayaziwa kanjalo kwiSACP ngenhloso yokumhlonipha ngokugcina izimfundiso zakhe zokuthanda imfundo.
UMzala wayeyilungu lokuqina lamaKhomanisi elalingalimbathisi iqiniso elazalelwa eDundee ngo-1955 lashonela eLondon ngo-1991. Ubalwa nezinye izishoshovu ezayibamba ishisa emzabalazweni kodwa kazangazidla izithelo ngezazikutshala ukuze leli lithole inkululeko.
UNkk Jennifer Schreiner onguSihlalo weMzala Nxumalo Centre uncome uMzala ngokuthanda ukufunda nokubhala ngesikhathi esekudingisweni. Ubonge uMzala ngokuzidela ngokuphila kwakhe wahlanganyela nababengahambisani nohulumeni wobandlululo. “UMzala wayengumcwaningi njengoba eminye yemibhalo yakhe isoshicilelweni lwababhali abahlonishwayo kuleli. Ababe nenhlanhla yokufunda eminye yemibhalo kaMzala bazuze lukhulu ngenkululeko yabantu abamnyama nokubaluleka kwabantu baseNingizimu Afrika ngokungabheki ibala labo. Siye KwaDlangezwa High School lapho okuvela ukuthi indlela yomzabalazo yagqama khona saze sadlulela nasoNgoye lapho aboshelwa khona ngoba eseka ozakwabo ababeyibambe eSoweto ngomhlaka 16 kuNhlangulana (June) ngo-1976 waboshwa wadingiswa kuleli. Esekudingisweni e-Angola wazimbandakanya noqeqesho lwaboMkhonto Wesizwe wagxila nasekubhaleni izincwadi,” usho kanje.
UMnu Thebolla uthe lokhu kwethulwa kweMzala Nxumalo Centre of Study kuyingqophamlando KwaZulu-Natal. Ubonge abalesi sikhungo ngokuqoka idolobha laseMgungundlovu ukuzosebenza nomasipala wakhona ongowesibili eNingizimu Afrika ngokunotha ngolwazi njengoba wakhiwa ngo-1830. Uthe uyathemba ukuthi abazohambela lesi sikhungo esivuliwe bazokleza kogwansile ngomlando waseNingizimu Afrika kuze kufike enkululekweni yaleli lizwe.